Dhalinyarro soomaali ah oo dhac ka geeystay dukaan ku yaala Göteborg | Somaliska
Xaafadda Eriksbo waxaa ay ku taala magaaladda Göteborg, waxaana ay ka mid tahay xaafadda ay ajaanibta iyo soomaaliduba degto. Hadaba dhalinyarro soomaali ah ayaa habeenimadii isniinta soo galeeysay dhac ka geeyteen dukaan yar oo ku yaala xaafadaas.
Dhalinyaradan oo afar aheyd ayaa damcay in ay dhacaan dukaanlihii xilli uu xirayey. Kooxdan ayaa dhaawac u geeystay ninkii lahaa dukaanka sida ay noo xaqiijiyeen dad ku sugan xaafadaas oo ay Somaliska.com la xirriirtay. Dukaanlaha oo dhaawac isha ka soo gaartay ayaa haatan ku sugan isbitaalka iyadoo dukaankiina uu xiran yahay maalintii labaad.
Booliska xaafadda oo dhalintan ku raad joogay ayaa gacanta ku soo dhigay afartoodii, waxaana ay suganayaan in la horkeeno maxkamadda. Dhalintan ayaa dadka xaafadda sheegeen in kan ugu yar uu ahaa 18 jir. Ugu dambeyntiina falalka noocaan ah ayaa moodaa ineey aad u soo laa laabteen tanoo ceeb iyo yax yax ku ah jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaan, iyadoo saxaafadda qaar ee taageera kooxaha xagjirka ah ee cunsuriyiinta ahi si aan xishood laheyn u wasaqeeya magaca soomaalida Iswiidhan.